जनतापाटी डेस्क शुक्रबार, मंसिर २०, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । न्याय परिषदले सर्वोच्चको रिक्त न्यायाधीश सिफारिस गर्न गरेको दोस्रो प्रयास पनि विफल भएको छ । अघिल्लो मंगलबार बसेको परिषद बैठककै एजेण्डा विहीबार पनि थन्काउनु परेको हो । मंगलबार बसेको बैठकले सात जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस र पाँच जनाको सरुवा गर्ने निर्णय मात्रै गर्न सक्यो । सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिसका हकमा भने विहीबारको बैठक पनि त्यस्तै भयो, ‘माछा–माछा–माछा, भ्यागुता’ ।
विहीबार बैठकको मूल एजेण्डा नै सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गर्ने थियो । बैठकमा झण्डै दुई घण्टा छलफल पनि भयो । तर, अन्तिममा एक जना जिल्ला न्यायाधीश सरुवाको निर्णय गर्दै टुंगियो । अब अर्को बैठक २५ मंसिरमा बस्ने भनिएको छ ।
कहाँ अड्कियो कुराे ?
कुरा अड्कियो, न्याय परिषद सदस्यबाट राजीनामा दिन लगाईएका पदम वैदिकलाई न्यायाधीश सिफासिस गर्ने न्याय परिषद अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाकै प्रस्तावमा आएर । प्रधानन्यायाधीश राणाले मंगलबार बसेको बैठकमा पनि वैदिकलाई सिफारिस गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । जहाँ परिषद सदस्य एवं सर्वोच्कै बरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र विभागीय मन्त्री एवं परिषद सदस्य उपेन्द्र यादवले असहमति जनाए ।
विहीबारको बैठक अघि यही विषयलाई लिएर नेपाल बारले समेत न्यायपरिषदको ध्यानाकर्षण गराईदियो । बारले न्यायाधीश नियुक्तिमा विधि, प्रक्रिया नमिच्न र न्यायालयको गरिमालाई ख्याल गर्न भन्यो । र, बारले न्याय परिषदकै सस्यलाई न्यायाधीश बनाइनु प्रचलन विपरीत हुने कुरा सम्झाएपछि विहीबार पनि राणाको प्रस्तावमा परिषदका अरु सदस्य सहमत भएनन् । र, तत्कालका लागि न्यायाधीश सिफारिस भाँडियो ।
बुधबारमात्र वैदिकले सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष राजिनामा दिएका थिए। उनले आफू सर्वोच्चका लागि सिफारिस हुने पक्का-पक्की ठानेरै राजिनामा दिएकाे बताइँदै छ।
फेरि पनि वैदिककै सम्भावना बढी
न्याय परिषदका एक जना सदस्यका अनुसार, ‘यो विषयको छलफल टुंगिएको छैन, जारी छ । यो बैठकमा ज–जसका विषयमा छलफल भयो, त्यो स्वभाविक छ । खास टुंगो अब अर्को बैठकबाट लाग्छ ।’ केदारप्रसाद चालिसे सेवानिवृत्त भएपछि अहिले सर्वोच्चमा न्यायाधीशको एक पद मात्रै खाली छ । त्यही पदपूर्तिका लागि कसरत भइरहेको हो । बाहिरफेरा उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेल, अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलको नाउँ पनि चर्चामा छ । तर, भित्रका मान्छेको जोडबल न्याय परिषद सदस्यबाट राजीनामा गरेका अधिवक्ता पदम वैदिकतिरै देखिन्छ । न्यायपरिषद अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश राणाले नै वैदिकलाई राजीनामा गर्न लगाउनुले पनि त्यही संकेत गर्छ ।
नाम चर्चामा रहेका मध्ये डा. दिनमणि पनि पूर्व माओवादी पंक्ति निकट मानिन्छन् । तर, पूर्व माओवादीमा पनि प्रचण्ड नजिक मानिएका वैदिकलाई राजीनामा गर्न लगाउनु भनेको प्रधानन्यायाधीश राणा ठूलै दबाबमा छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । डा. दिनमणि पूर्व माओवादी निकट भएपनि उनी फरक गुटका भएका कारण पछारिन सक्छन्, उनलाई नजिकबाट चिन्ने एक कानून व्यवसायीले भने, ‘डा. दिनमणि असाध्यै अध्ययनशील मान्छे हुन् । पूर्व माओवादी निकट भए पनि उनी वौद्धिक पृष्ठभूमिको भएकै कारण यस्तोमा टाउको हाल्दैनन् होला पनि । र, यो पल्ट उनको पालो आउला जस्तो लाग्दैन । वैदिक प्रचण्डका असाध्यै नजिक छन् । र, प्रधानमन्त्रीले पनि उनैलाई अघि सार्छन् ।’ संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले वैदिकलाई अघि सार्नेवित्तिकै सर्वोच्चको सिढी चढ्ने पालो वैदिककै आउनेमा बढ्ता सम्भावना छ ।
त्यति मात्रै होइन, हिजो प्रधानन्यायाधीशमा दिपकराज जोशीलाई रोकेर चोलेन्द्रशमशेरलाई स्वीकृत गर्दा सत्ताधारी दल नेकपाबाट संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले दायाँ–बायाँ भयो कि, ‘जे पनि हुनसक्छ’ भनेर पहिल्यै तर्साइसकेका छन् । त्यहीकारण पनि सत्ताधारीको उच्च तहबाट आएको दबाबलाई कसरी नकार्न सक्लान्, राणाले ?
एकफेर पहिले पनि यस्तो हुनै आँटेको थियो
न्याय परिषद सदस्यलाई न्यायाधीश सिफारिस गर्ने घटना यसअघि पनि झण्डै घटेको थिएन । त्यसो भएको भए नेपाली न्यायिक इतिहासमा त्यो गलत उदारण हुन्थ्यो । त्यतिबेला न्यायपरिषद सदस्य रहेका उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले न्यायाधीश बन्ने ईच्छा प्रकट गरे । न्यायपरिषद अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश थिए, ‘दाह्रीवाला’ दामोदरप्रसाद शर्मा । न्यौपानेलाई न्यायाधीश सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गर्दा तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं न्याय परिषद सदस्य रामकुमारप्रसाद शाहले विरोध गरेपछि शर्मा हच्किए । पछि न्यौपानेले न्यायपरिषदमा आफ्नो कार्यकाल छँदै राजीनामा दिएका थिए । तर, केही समय अघि मात्रै सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त हुँदा न्यौपाने र शर्माले एक जना आफ्नो मान्छे घुसाई छाडे । सर्वोच्च न्यायलय नेतृत्वको हकमा शर्मा सबैभन्दा ‘पतुर’ कहलिएका प्रन्या हुन् ।